အလှူဒါန (၇)မျိုးအကြောင်း - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အရှင်ဝိမလဝံသ မှ August 6, 2012 7:00pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“အသင်သည် အလှူဒါနမပြုတတ်၍ ဖြစ်သည်” ဟု မြတ်စွာဘုရားက ဖြေကြားတော်မူသည်။ ငွေကြေးတစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မရှိသော ဆင်းရဲသား အကျွန်ုပ်ဖို့ မည်ကဲ့သို့ အလှူဒါနပြုနိုင်ပါမည်နည်း။ ‘အသင်ဤသို့မဟုတ်သည်ကို မှတ်သားလော့။ တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူသည် ငွေကြေးမရှိသော်လည်း ပေးကမ်းနိုင်သော အလှူဒါန ခုနှစ်မျိုးရှိသည်။ ထိုခုနှစ်မျိုးမှာ
၁။ မျက်နှာဟန်အမူအရာဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်း၊ အပြုံးဖြင့်ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံခြင်း၊
၂။ နှတ်ဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်း၊ အားပေးစကား၊ နှစ်သိမ့်စကား၊ ချီးကျူးစကား၊ ညှာတာစကား၊ နွေးထွေးသောစကားများ၊ ပြောဆိုခြင်း။
၃။ စိတ်ဖြင့်အလှူဒါနပြုခြင်း၊ စိတ်တံခါးကိုဖွင့်၍ သူတစ်ပါးကို ပွင့်လင်းရိုးသားစွာ ဆက်ဆံခြင်း၊
၄။ အမြင်ဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်း၊ ကောင်းသောစေတနာ အမြင်ဖြင့် သူတပါးကိုကြည့်မြင်တတ်ခြင်း၊
၅။ ကာယလုပ်အားဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်း၊ ကိုယ်နိုင်နင်းသော လုပ်ဆောင်ပေးမှုဖြင့် သူတစ်ပါးကို ကူညီခြင်း၊
၆။ နေရာထိုင်ခင်း အလှူဒါနပြုခြင်း လှေစီး၊ ကားစီးသည့်အခါ မိမိထိုင်ခုံနေရာကို အိုမင်းမစွမ်းသူ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသူ၊နှင့် ကလေးငယ်တို့အား မိမိ၏ထိုင်ခုံနေရာကို ထိုင်စေခြင်း။
၇။ နေအိမ်အလှူဒါနပြုခြင်း ၊ မိမိ၏ အိမ်နေရာကိုသူတပါးတို့ အနားယူရန် ပေးကမ်းခြင်း။
မည်သူမဆို ဤအလှူဒါန ခုနှစ်မျိုးသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပေးကမ်းလေ့ရှိသည့်အကျင့် ကောင်းရှိလျှင် အောင်မြင်ခြင်းသည် ထက်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါလာမည်သာဖြစ်ပါသည်။
ပါမောက္ခဒေါ်ခင်ဖြူ(မြင်းခြံ)… မြတ်မင်္ဂလာစာစောင်။ ။
စာဖတ်သူအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍ လိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်စုံကြပါစေ။
မာန်အောင်ရပ်ကွက် တာမွေမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း- 0973181016
ဦးဇင်းဘလော့သို့လည်းလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Views: 472
ဘလော့အမျိုးအစား(ဘာသာရေး) Like5members like this
bokyaw468 သည် August 20, 2012 က 6:59pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ တပည်တော်နှင့်အတူအများသူငါဓမ္မမိတ်ဆွေ
သူတော်ကောင်းအပေါင်တို့မသိ့မေ့လျော့ဖြစ်နေတာလေးတွေကိုတင်ပြပေးတဲအတွက်ကျေးဇူးပါဘုရား။ ၄၄၂ဇော်နိုင် သည် August 13, 2012 က 10:17amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ လိုက်နာပါ့မယ်ဘုရား အောင်မျိုးထွန်း သည် August 10, 2012 က 4:34pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဖတ်ရှုမှတ်သားသွားပါတယ်... မျှဝေပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဘုရား ayeayemaw သည် August 9, 2012 က 12:33pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ thanks par pha yar. ei phyu sin သည် August 8, 2012 က 12:12pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ဘုရား htin lin thar သည် August 7, 2012 က 11:27pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ thanks အရှင်အာစိဏ္ဏ သည် August 7, 2012 က 11:13pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဗဟုသုတရပါတယ်
ဘုရား နီစံ (အနီ) သည် August 7, 2012 က 8:06amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရာ့.. ဖတ်မှတ်ထားပါတယ်ဘုရာ့. RSS
နီစံ (အနီ) ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything Thaung Tan liked dimplemit's blog post 'မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြန်ပေါ့....'1 minute agoThaung Tan liked မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'2 minutes agoနီစံ (အနီ) and အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) are now friends24 minutes agoနီစံ (အနီ) shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebook(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း27 minutes agoနီစံ (အနီ) liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'29 minutes agoမူကြိုဆရာ posted blog posts၀ိပတ္တိတရားလေးပါးနှင့် ဗျသနတရားငါးပါးဥပုသ် သီလ စောင့် ခြင်း ၏အကျိုး ကျေးဇူးမှာ…..“သမ္မပ္ပဓာန် လေးပါး (တရားအားထုတ်ခြင်း လုံ့လ လေးမျိုး)”5 more…1 hour agoမြူနှင်းမှုံ liked whitecolor's blog post 'လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား'3 hours agoမြူနှင်းမှုံ liked dimplemit's blog post 'မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြန်ပေါ့....'3 hours agoမြူနှင်းမှုံ liked မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'3 hours agoမြူနှင်းမှုံ liked မူကြိုဆရာ's blog post 'သဲပုံစေတီတော် ပေါ်ပေါက်လာပုံလေးပါ'3 hours agoမြူနှင်းမှုံ liked thein wai's blog post 'မြတ်စွာဘုရား၏ ထူးခြား အံ့သြဖွယ်များ (ဗုဒ္ဓနေ့အတွက်)။'3 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookသဲပုံစေတီတော် ပေါ်ပေါက်လာပုံလေးပါ4 hours ago More... RSS